कोलकाताविरुद्ध पन्जाबको सानदार जित
११ कार्तिक २०७७, मंगलवार October 27, 2020 शुचि खबर	0 Comments
कोलकाताले प्रस्तुत गरेको १ सय ५० रनको लक्ष्य पन्जाबले १९ औं ओभरमा २ विकेट गुमाउँदै पूरा गरेको हो । पन्जाबको जितमा ओपनर मन्दीप सिंहले अविजित ६६ रन जोडे । उनले ५६ बलको सामना गर्दै ८ चौका र २ छक्का प्रहार गरे ।
त्यसअघि कप्तान केएल राहुल २८ रन जोड्दै पेभेलियन फर्किएका थिए । वरुण चक्रवर्तीको बलमा एलबीडब्लु आउट हुनुअघि उनले २५ बलमा ४ चौका प्रहार गरे । उनी आउट हुँदा टोली ४७-१ को स्थितिमा थियो । गेल १९ औं ओभरको पहिलो बलमा लोकी फर्गुसनको बलमा क्याच आउट भएपनि निकोलस पुरन २ रनमा नटआउट रहँदै जितसम्म डोर्याए ।
यस जितसँगै पन्जाब कोलकातालाई नै उछिन्दै अंक तालिकाको चौथो स्थानमा उक्लिएको छ । पन्जाब र कोलकाता दुवैको १२ खेलमा १२ अंक भएपनि नेट रनरेटमा पन्जाब अघि बढेको हो । मुम्बई, दिल्ली र बेंगलोर ११ खेलमा समान १४ अंकसहित क्रमश: शीर्ष तीन स्थानमा रहेका छन् । राजस्थानको १० अंक तथा हैदरावाद र चेन्नईको ८-८ अंक रहेको छ ।
← आजको राशिफल, वि.सं. २०७७।०७।११ (ई.स‌ं. 27 October 2020)
मनोज गजुरेलमा कोरोना संक्रमण →
२४ घण्टामा थपिए २९४२ कोरोना संक्रमित, उपत्यकमा थपिए १६९८ , हालसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या ७३९ पुग्यो
बाढीपहिरामा परी ३१ जना बेपत्ता, मृत्यु हुनेको संख्या ४८ पुग्यो
३ कार्तिक २०७८, बुधबार December 10, 2021 शुचि खबर	0
चेन्नई सुपर किंग्सद्वारा कोलकाता नाइट राइडर्स ६ विकेटले पराजित